Go’aamo Ka soo Baxay Shirka Towfiiq iyo Ganacsade Magac Cusub oo loogu Wan-qalay lagu shaaciyey | Salaan Media
Go’aamo Ka soo Baxay Shirka Towfiiq iyo Ganacsade Magac Cusub oo loogu Wan-qalay lagu shaaciyey
Harta Sheekha (Salaan Media)- Magaalada Harta Sheekh ee dowlad-deegaanka Soomaalida ee Itoobiya, ayaa lagu soo gebo-gabeeyey shir loogu magac-daray Towfiiq oo ay deegaankaas ku qabsadeen Beesha Axmed Cabdalle (Sacad Muuse) oo aayahooda kaga tashanayay.
Shirka oo ujeeddadiisu ahayd mid lagu xoojinayo midnimada Beesha, lagagana hadlay danaha guud ee Beesha, waxa ka qayb-galay wax-garadka, aqoonyahanka madax-dhaqameed, dhalinyarada iyo haweenka beesha oo muddo dhowr maalmood ah u fadhiyey halkaas.
Gunaanadkii shirka waxa laga soo saaray go’aamo ka hadlaya danaha beesha iyo danaha beelaha ay deriska yihiiin, waxaana soo xidhay Suldaanka Guud ee Beelaha Subeer Awal Suldaan Xasan Suldaan Cabdilaahi Suldaan Cabdiraxmaan.
Dhanka Kale, suldaanku waxa uu halkaas ka shaaciyey inuu magaca ka beddelay isla markaana magaciisa shirka loo bixiyey ku mataaneeyey mid ka mid ah ganacsatada Beesha oo lagu magacaabo jiray Faysal Faarax (Jaajuus), kaas oo suldaanku sheegay in wixii maanta ka dambeeyey loo bixiyey Faysal Tawfiiq.
Muuqaalka Hoose ka daawo Go’aamada ka soo baxay Shirka iyo Magaca uu Suldaanku u bixiyey ganacsade Faysal Faarax.
Musharax Maxamed Bookh Oo Wecyigellin Ka Bilaabay Waqooyiga Gobolka Gabiley